HOUSE RENT IN SOUTH OKKALAPA (ID-1169) အား တောင်ဥက္ကလာပ တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
HOUSE RENT IN SOUTH OKKALAPA (ID-1169)
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၅၂ရက်​
2 Stories in land area - 4800 sqft for rent in South Okkalapa Township. House has Living-room,5Master Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. House with seven air-conditioners. The monthly rent price of house is - 30 Lks (Nego).
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မြေအကျယ် - ၄၈၀၀ စတုရန်းပေအတွင်းရှိ ငှားရန်နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် ငါးခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် ခုနှစ်လုံး အသင့်တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - သိန်း ၃၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
တောင်ဥက္ကလာရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ် (ID-1169)
အမည်: HOUSE RENT IN SOUTH OKKALAPA (ID-1169)